Koi hove quartz - Tsvuku & orange hematite inclusions - vhidhiyo
Koi hove quartz
Tags Koi hove, Goldstone
Koi hove quartz ibwe rinoreva uye kristaro zvivakwa.
Tenga zvakasikwa Koi hove quartz muchitoro chedu
Koi hove yehove ibwe risinganetsi. Tsvuku & orenji ihematite inclusions. Rakajeka ruvara rwesimbi yezvinhu yakave yakasanganiswa. Hematite uye quartz zvinowanzo kuwanikwa zvakasiyana, asi zvisingawanzo pamwe chete.
Hematite, zvakare yakanyorwa seyeematite, yakajairika iron ironidhi ine fomati yeFe2O3 uye yakapararira mumatombo uye nevhu. Hematite mafomu ari muchimiro chemakristali kuburikidza neiyo rhombohedral lattice system, uye ine yakafanana kristaro chimiro se ilmenite uye corundum. Hematite uye ilmenite vanogadzira mhinduro yakasimba pamhepo tembiricha pamusoro pe950 ° C.
Hematite ine mavara matema kune simbi kana sirivheri-grey, brown kune tsvuku-brown, kana tsvuku. Iyo inocherwa seyakanyanya ore yesimbi. Mhando dzakasiyana dzinosanganisira mazino ore, martite, iron iron uye specularite. Nepo mafomu aya achisiyana, vese vane ngura-dzvuku tsvuku. Hematite yakaoma kupfuura yakachena simbi, asi yakawanda brittle. Maghemite ndeye hematite- uye magnetite-ine hukama neayiti oxide mineral.
Clay sized hematite makristasi anokwanisa kuitikawo sechipiri mineral inogadzirwa nemamiriro ekunze ekunze muvhu, uye pamwe chete nedzimwe iron oxides kana oxyhydroxides dzakadai se goethite, ine mhosva yeiyo ruvara rutsvuku rwevhu yakawanda inopisa, yekare, kana neimwe nzira yakakurisa ivhu.
Koi hove yequartz yakaoma, kristallini maminera akaumbwa nesilicon uye maatomu eoksijeni. Maatomu akabatanidzwa mune inoenderera sisitimu yeSiO4 silicon okisijeni tetrahedra, neoksijeni yega yega ichigovaniswa pakati pemetrahedra mbiri, ichipa chimiro chemakemikari cheSiO2. Quartz ndiyo yechipiri yakawanda kwazvo zvicherwa muPasi rese kondinendi, kumashure kwefeldspar.
Kune akawanda akasiyana marudzi e quartz, akati wandei ayo ari mahafu-anokosha matombo. Kubvira panguva dzekare, marudzi e quartz ave ari anonyanya kushandiswa mineral pakugadzira zvishongo uye akaomeswa nematombo akavezwa, kunyanya muEurasia.
Koi hove quartz ibwe rinoreva uye kristaro kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Quartz inozivikanwa saiye tenzi murapi uye ichawedzera simba nekufunga, pamwe nemhedzisiro yezvimwe makristuru. Iyo inobata, inochengetedza, inoburitsa uye inogadzirisa simba. Bvisa Quartz inodhonza simba risingaiti remarudzi ese, ichideredzera kumashure radiation, kusanganisira electromagnetic smog kana petrochemical emanations. Inoenzanisa uye inomutsiridza ndege dzemuviri, dzemupfungwa, dzemweya uye dzemweya. Inochenesa uye inokwidziridza nhengo uye nhengo dzisinganzwisisike uye inoita seyakadzika mweya yekushambidza, ichibatanidza chimiro chemuviri nepfungwa. Iyo inowedzera kugona kwepfungwa. Inobatsira kusimbisa uye kuvhura ndangariro. Inomutsa kudzivirira kwemuviri uye inounza muviri mumuviri.
Koi hove ye quartz pasi pe microscope
Tenga echinyakare Koi hove yequartz mune yedu gem shopu
Quartz ine marcasite
Tags Marcasite, Goldstone
Goridhe rutilated quartz ne hematite
Tags Hematite, Goldstone, Rutilated, Rutile
Tags Gilalite, Goldstone
Tags Enhydro, Goldstone